မြစ်ကြီးလည်း မခမ်းစေနဲ့ သစ်ပင်ကြီးလည်း မလဲစေနဲ့ ထုံးအိုးကြီးလည်း မကွဲစေနဲ့ ဆိုတဲ့ စကားကြီး သုံးခွန်း အဓိပ္ပါယ် - Nalonetardiary
မြစ်ကြီးလည်း မခမ်းစေနဲ့ သစ်ပင်ကြီးလည်း မလဲစေနဲ့ ထုံးအိုးကြီးလည်း မကွဲစေနဲ့ ဆိုတဲ့ စကားကြီး သုံးခွန်း အဓိပ္ပါယ်
May 22, 2020 Nalonetar Diary Buddha 0
၁ ။ မွဈကွီးလညျး မခမျးစနေဲ့
၂ ။ သဈပငျကွီးလညျး မလဲစနေဲ့
၃ ။ ထုံးအိုးကွီးလညျး မကှဲစနေဲ့
ကွားတော့ ကွားဖူး၏ သို့သျော တှငျတှငျ ကယျြကယျြ သိသူတော့ ရှား၏
မွဈကွီးလညျး မခမျးပါစနေဲ့ ဆိုတာ ကွညျလငျ အေးမွတဲ့ တသှငျသှငျစီဆငျးနတေဲ့ မွဈကွီးနဲ့တူတဲ့ … မတ်ေတာတရားမြား လူသားတှမှော မခမျးခွောကျပါစနေဲ့ .. လို့. ဆိုလိုခွငျးဖွဈ၏ ၊
လူသား အခငျြးခငျြး ဆှမြေိုး မိတျသင်ျဂဟအခငျြးခငျြး မတ်ေတာထားပွီး နထေိုငျကွမယျ ..အားလုံးသော သတ်တဝါအနန်တ အပျေါမှာလညျး မတ်ေတာစမျးရမြေား မခမျးခွောကျအောငျ အမွဲပှားမြားပွီး နထေိုငျကွရပါမယျ
မွဈအတှငျးမှာ စီးဆငျးနတေဲ့ စမျးရသေညျ ကွညျလငျ အေးမွတဲ့ သဘောရှိသလို သတ်တဝါ အားလုံးအပေါမှာ ပှားမြားနတေဲ့ မတ်ေတာ ဆိုတာလညျး ကွညျလငျအေးမွလှ၏ ၊
မတ်ေတာ ပှားမြားသူရဲ့ သန်တာနျမှာ မတ်ေတာဓာတျတှေ ဝငျရောကျလာပွီဆိုယငျ အဲ့ဒီပုဂ်ဂိုလျရဲ့ နှလုံးသားဟာလဲ တခွားအခြိနျမှာ ဖွဈနတေဲ့ နှလုံးသားနဲ့မတူတော့ဘဲ ကွညျလငျလာ၏ ဘုရားရှငျက … စိတ်တေ ပသန်နေ လောဟိတံ ပသီဒတိ .. လို့မိနျ့၏
စိတျကွညျလငျလာပွီဆိုယငျ ရုပျလဲကွညျလငျလာ၏ … အထူးသဖွငျ့ မတ်ေတာ အမွဲပှားမြားနတေဲ့ပုဂ်ဂိုလျ ရဲ့. မတျြနှာဟာ သာမနျပုဂ်ဂိုလျတှနေဲ့ မတူတော့ပါဘူး ၊ သတိထားကွညျ့ယငျ ကှာခွားနတော တှရေ့ပါလိမျ့မယျ
ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ မတ်ေတာ ဆိုတဲ့ အကွညျဓာတျကလေးက. သူ့သန်တာနျမှာ ကိနျးဝပျနလေို့ပါဘဲ ။
သဈပငျကွီးဆိုတာ … ဘုရား တရား သံဃာ လို့ချေါဆိုအပျတဲ့ ရတနာသုံးပါး ကို ဆိုလိုခွငျးဖွဈ၏ ။
ပကတိ သဈပငျကွီးသညျ … အကိုငျးအခတျ ဝဝေစောစာလညျး ရှိတယျ ၊ ပငျစညျကလဲ ပွနျ့ပှား အရိပျအာဝါသ လညျး ကောငျးနမေယျဆိုယငျ …အဲ့ဒီ သဈပငျကွီးရဲ့. အရိပျမှာ သတ်တဝါ ခိုနားနနေိုငျ၏ ၊
ထို သဈပငျရဲ့. အရိပျအောကျ ဝငျလိုကျတာနဲ့တပွိုငျနကျထဲ.. ကိုယျစိတျနှဈပါး အေးခမျြးမှုကိုခံစားရသလိုပါဘဲ ရတနာသုံးပါး ဆိုတဲ့ အရိပျဟာလညျးဝငျရောကျ ခိုနားတဲ့ သတ်တဝါ တိုငျးကို .. ကိုယျစိတျနှဈပါး အေးမွမှုကို အပွညျ့အဝ ပေးနိုငျ၏ ။
ဝငျရောကျ ခိုနားတဲ့ သူတိုငျးဟာ ရတနာသုံးပါး ရဲ့အရိပျကွောငျ့ ကိုယျစိတျနှဈပါး ငွိမျးခမျြးသှားတာခွညျးပါဘဲ ။
ဒါကွောငျ့ ရှေးလူကွီး သူမမြားက … မိမိကို အရိပျအာဝါသပေးနတေဲ့ သဈပငျကွီးကို ခုတျလဲ မမိပါစနေဲ့ လိုပွေားဆိုကွခွငျးဖွဈ၏ ထို့အတူပါဘဲ မိမိတို့ နားခိုရာ အားထားရာကိုးကှယျရာ ဖွဈတဲ့ ရတနာသုံးပါး အရိပျကိုလဲ မပဈပယျရဘူး မမရေ့ဘူး
ဘာကွောငျ့လဲ ရတနာသုံးပါး ရဲ့. ဂုဏျကြေးဇူးဟာ သိပျပွီးတော့ကွီးမားလို့ပါဘဲ …သဈပငျကွီးရဲ့ အရိပျဟာ အေးမွသလိုရတနာသုံးပါး ၏ အရိပျဟာလညျး ပစ်စုပ်ပနျ ဘဝ သာမက. တမလှနျဘဝ အတှကျပါ ငွိမျးအေးမှုကိုပေး၏
ဒါကွောငျ့ … ရတနာသုံးပါး လို့ ချေါဆိုရတဲ့ သဈပငျကွီးကို မမပေ့ါနဲ့. အမွဲသတိရပွီး ကိုးကှယျဆညျးကပျရမညျ ဟု ဆိုလို၏ ။
ထုံးအိုးကွီးဆိုတာ …. ရှေးက မိဘ ဘိုးဘှား တှရေဲ့ အစဉျအလာ လုပျထုံး လုပျနညျးကို ပွေားတာပါဘဲ
မိဘ ဘိုးဘှား တှရေဲ့. ယဉျကြေးမှု အစဉျအလာ ကောငျးမြား ၊ မိဘ ဘိုးဘှား တှေ ပွုခဲ့တဲ့ ဘာသာရေး သာသနာရေး အစဉျအလာကောငျးမွတျတဲ့ ထုံးတမျးစဉျလာတှေ အဆုံးအမတှေ အကငျြ့စာရိတ်တတှေ အားလုံးကို မဖတျြစီးရဘူး မမပြေ့ောကျရဘူး
အစဉျလာကို ထိနျးသိမျးပွီး ဆတျလကျဆငျေရှကျရမယျ …“ ဒါကိုဘဲ ထုံးအိုးကွီး မကှဲစနေဲ့ ´´ ဟုပွေားဆိုခွငျးဖွဈ၏ ။
ဒါကွောငျ့ ဗုဒ်ဓဘာသာ သူတျောစဉျ ပုဂ်ဂိုလျ မြားရှေးက ဆုံးမခဲ့တဲ့ “ စကားကွီး ´´ သုံးခှနျး၏အဓိပ်ပါယျ ကို နားလညျနိုငျပါစေ
နားလညျသညျအားလြှျောစှာ ကငျြ့သုံးနိုငျပါစေ ….ကငျြ့သုံးနိုငျသညျအလြှောကျ ဘာသာ သာသနာကို ထိမျးသိမျး စောငျ့ရှောကျ နိုငျကွပါစေ
မိမိကိုယျကို ခမျြးသာအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျပါစေ..။
၁ ။ မြစ်ကြီးလည်း မခမ်းစေနဲ့
၂ ။ သစ်ပင်ကြီးလည်း မလဲစေနဲ့
၃ ။ ထုံးအိုးကြီးလည်း မကွဲစေနဲ့
ကြားတော့ ကြားဖူး၏ သို့သော် တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် သိသူတော့ ရှား၏
မြစ်ကြီးလည်း မခမ်းပါစေနဲ့ ဆိုတာ ကြည်လင် အေးမြတဲ့ တသွင်သွင်စီဆင်းနေတဲ့ မြစ်ကြီးနဲ့တူတဲ့ … မေတ္တာတရားများ လူသားတွေမှာ မခမ်းခြောက်ပါစေနဲ့ .. လို့. ဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏ ၊
လူသား အချင်းချင်း ဆွေမျိုး မိတ်သင်္ဂဟအချင်းချင်း မေတ္တာထားပြီး နေထိုင်ကြမယ် ..အားလုံးသော သတ္တဝါအနန္တ အပေါ်မှာလည်း မေတ္တာစမ်းရေများ မခမ်းခြောက်အောင် အမြဲပွားများပြီး နေထိုင်ကြရပါမယ်
မြစ်အတွင်းမှာ စီးဆင်းနေတဲ့ စမ်းရေသည် ကြည်လင် အေးမြတဲ့ သဘောရှိသလို သတ္တဝါ အားလုံးအပေါမှာ ပွားများနေတဲ့ မေတ္တာ ဆိုတာလည်း ကြည်လင်အေးမြလှ၏ ၊
မေတ္တာ ပွားများသူရဲ့ သန္တာန်မှာ မေတ္တာဓာတ်တွေ ဝင်ရောက်လာပြီဆိုယင် အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ နှလုံးသားဟာလဲ တခြားအချိန်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ နှလုံးသားနဲ့မတူတော့ဘဲ ကြည်လင်လာ၏ ဘုရားရှင်က … စိတ္တေ ပသန္နေ လောဟိတံ ပသီဒတိ .. လို့မိန့်၏
စိတ်ကြည်လင်လာပြီဆိုယင် ရုပ်လဲကြည်လင်လာ၏ … အထူးသဖြင့် မေတ္တာ အမြဲပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ရဲ့. မျတ်နှာဟာ သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ မတူတော့ပါဘူး ၊ သတိထားကြည့်ယင် ကွာခြားနေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မေတ္တာ ဆိုတဲ့ အကြည်ဓာတ်ကလေးက. သူ့သန္တာန်မှာ ကိန်းဝပ်နေလို့ပါဘဲ ။
သစ်ပင်ကြီးဆိုတာ … ဘုရား တရား သံဃာ လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ ရတနာသုံးပါး ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏ ။
ပကတိ သစ်ပင်ကြီးသည် … အကိုင်းအခတ် ဝေဝေစာစာလည်း ရှိတယ် ၊ ပင်စည်ကလဲ ပြန့်ပွား အရိပ်အာဝါသ လည်း ကောင်းနေမယ်ဆိုယင် …အဲ့ဒီ သစ်ပင်ကြီးရဲ့. အရိပ်မှာ သတ္တဝါ ခိုနားနေနိုင်၏ ၊
ထို သစ်ပင်ရဲ့. အရိပ်အောက် ဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ထဲ.. ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး အေးချမ်းမှုကိုခံစားရသလိုပါဘဲ ရတနာသုံးပါး ဆိုတဲ့ အရိပ်ဟာလည်းဝင်ရောက် ခိုနားတဲ့ သတ္တဝါ တိုင်းကို .. ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး အေးမြမှုကို အပြည့်အဝ ပေးနိုင်၏ ။
ဝင်ရောက် ခိုနားတဲ့ သူတိုင်းဟာ ရတနာသုံးပါး ရဲ့အရိပ်ကြောင့် ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ငြိမ်းချမ်းသွားတာခြည်းပါဘဲ ။
ဒါကြောင့် ရှေးလူကြီး သူမများက … မိမိကို အရိပ်အာဝါသပေးနေတဲ့ သစ်ပင်ကြီးကို ခုတ်လဲ မမိပါစေနဲ့ လိုပြေားဆိုကြခြင်းဖြစ်၏ ထို့အတူပါဘဲ မိမိတို့ နားခိုရာ အားထားရာကိုးကွယ်ရာ ဖြစ်တဲ့ ရတနာသုံးပါး အရိပ်ကိုလဲ မပစ်ပယ်ရဘူး မမေ့ရဘူး
ဘာကြောင့်လဲ ရတနာသုံးပါး ရဲ့. ဂုဏ်ကျေးဇူးဟာ သိပ်ပြီးတော့ကြီးမားလို့ပါဘဲ …သစ်ပင်ကြီးရဲ့ အရိပ်ဟာ အေးမြသလိုရတနာသုံးပါး ၏ အရိပ်ဟာလည်း ပစ္စုပ္ပန် ဘဝ သာမက. တမလွန်ဘဝ အတွက်ပါ ငြိမ်းအေးမှုကိုပေး၏
ဒါကြောင့် … ရတနာသုံးပါး လို့ ခေါ်ဆိုရတဲ့ သစ်ပင်ကြီးကို မမေ့ပါနဲ့. အမြဲသတိရပြီး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရမည် ဟု ဆိုလို၏ ။
ထုံးအိုးကြီးဆိုတာ …. ရှေးက မိဘ ဘိုးဘွား တွေရဲ့ အစဉ်အလာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းကို ပြေားတာပါဘဲ
မိဘ ဘိုးဘွား တွေရဲ့. ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာ ကောင်းများ ၊ မိဘ ဘိုးဘွား တွေ ပြုခဲ့တဲ့ ဘာသာရေး သာသနာရေး အစဉ်အလာကောင်းမြတ်တဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေ အဆုံးအမတွေ အကျင့်စာရိတ္တတွေ အားလုံးကို မဖျတ်စီးရဘူး မမေ့ပျောက်ရဘူး
အစဉ်လာကို ထိန်းသိမ်းပြီး ဆတ်လက်ဆေင်ရွက်ရမယ် …“ ဒါကိုဘဲ ထုံးအိုးကြီး မကွဲစေနဲ့ ´´ ဟုပြေားဆိုခြင်းဖြစ်၏ ။
ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ သူတော်စဉ် ပုဂ္ဂိုလ် များရှေးက ဆုံးမခဲ့တဲ့ “ စကားကြီး ´´ သုံးခွန်း၏အဓိပ္ပါယ် ကို နားလည်နိုင်ပါစေ
နားလည်သည်အားလျှော်စွာ ကျင့်သုံးနိုင်ပါစေ ….ကျင့်သုံးနိုင်သည်အလျှောက် ဘာသာ သာသနာကို ထိမ်းသိမ်း စောင့်ရှောက် နိုင်ကြပါစေ
မိမိကိုယ်ကို ချမ်းသာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ..။
အဲယားကွန်းတက်ဆင်ရန် အခန်းတစ်ခန်းရဲ့ cooling load ကို တွက်ချက်ခြင်း